Ndingasela ibhiya kwisuna? - inzuzo kunye nokwenzakala
ezaposwa ngomhla 19.09.2021 19.09.2021
Ndingasela ibhiya kwisuna?
Wonke umntu uyazi ukuba iinkqubo zokuhlamba zinempembelelo entle emntwini. Kwaye abantu abaninzi bayayisebenzisa, kuba kuphela kwindawo yokuhlambela ungakhululeka kwaye uhlambe. Ibhafu kunye ne-sauna ziluncedo kakhulu ebantwini, zinefuthe elihle emzimbeni nasekucoceni ngengqondo.
Umphunga wokuhlambela unceda ekususeni ityhefu eyingozi, kunye nokukhawulezisa imetabolism. Iinkqubo zonyusa ukujikeleza kwegazi, zinciphisa iintloko, ziphucula inkqubo yeemvakalelo. Ebhafini, imeko iyenyuka kwaye ukungazinzi koxinzelelo kuyanyamalala.
Abantu abaninzi babuza umbuzo- ngaba kunokwenzeka ukuba basele ibhiya ibhafu... Inani elincinane, ngokutsho uphando olwenziweyo, kwafumaniseka ukuba kuyimfuneko kakhulu. Ubhiya kunye ne-sauna zizinto ezimbini ezingenakwahlulwa, ukwamkelwa kwesi siselo yinkqubo emnandi nesempilweni. Ibhiya sisiselo esisusa isinyithi esinzima kunye neetyuwa zealuminium emzimbeni. Ezi mpawu zonyuka amatyeli aliqela xa uthatha iinkqubo zokuhlamba. Kodwa kungcono ukuthatha ibhiya engenamandla ukukhanya.
Ubhiya kunye ne-sauna kufana nokuqesha i-manipulator kumthengi, zizinto ezilungileyo kuphela. Emva kotyelelo ngalunye kwigumbi lomphunga, ngexesha lenkqubo yokugcwala, kufuneka uthathe i-0 yeelitha zalesi siselo ukuya kwi-33 yeekhilogram ubunzima bomzimba. Ukuba umntu unobunzima obungaphezulu kwe-100 kilogram, kuyacetyiswa kuye ukuba atye malunga nesiqingatha selitha yebhiya emva "kwesibini" ngasinye. Kufuneka kwakhona uthathe ingqalelo kumgudu we-metabolism kunye neenkqubo.
Indawo yokuhlambela ayikho ukuze kuselwe ibhiya apho; ibhiya kufuneka ityiwe ngobuninzi bayo kwaye izibonelelo zempilo. Umntu ngamnye kufuneka azikhethele uhlobo lwebhiya olulungele yena, kunye nolawulo lwakhe lokusela. Kodwa yintoni enokubangcono kunenkampani elungileyo echitha ixesha kwindawo yokuhlambela okanye kwi-sauna, nangaphandle kweglasi yesiselo esinxilisayo ?! Mhlawumbi akukho nto, konke kuxhomekeke kumnqweno, ixesha kunye namandla emali.
Iprostatitis kunye nokuhlamba: ngaba kunokwenzeka ukuba ubambe nge-prostatitis
Njani nangokusela ibhiya ngokuchanekileyo?
IVodka ngebhiya-Iziphumo zokusela utywala
Ofuro (ibhafu yaseJapan): iimpawu ezahlukileyo, ukubuyekeza
Ngubani owangenisa ubhiya? Imbali yokuvela kwesiselo
exhonyiweyo Indlela yokuphila ephilileyo
Edlulileyo Uthintelo kunye nokukhuselwa kwizifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini
Okulandelayo Umhla oyimfama: indlela yokuziphatha?
Imibuzo ye-82 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,728.